I-Arkansas A-Frame - I-Airbnb
Compton, Arkansas, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Joseph
Le-A-frame ethokomele isendaweni eseceleni, kodwa elungele izindlela eziningi zokuhamba izintaba kanye nezindawo zokufinyelela e-Upper Buffalo. Kusukela ngesikhathi ufika ngaso, uzofuna ukuphumula futhi uxhumane kabusha nemvelo. Buka izilwane zasendle kusukela kuvulandi ongemuva noma ujabulele ukushona kwelanga ngenkathi uhlezi emlilweni. Eduze kokuntantayo, izindlela zokuhamba izintaba, ukugibela amatshe, ukuhamba ngebhayisikili, ukubuka izintaba-mlilo, ulayini woziphu, ukugibela i-ATV/UTV, phakathi kwezinye izinto eziningi. Imizuzu eyi-10 kuphela ukuya ePonca nemizuzu engama-20 ukuya eHarrison.
Womabili amakamelo okulala anomatilasi be-queen foam memory ukukusiza ukuthi uphumule ngokunethezeka. Elinye lamakamelo okulala lisendaweni ephezulu ebheke egumbini lokuphumula. Ekamelweni lokuphumula elikhulu, kunombhede wokudonsa onomatilasi we-queen memory foam. Amagumbi okugeza amabili agcwele kanye nezindawo zokuhlala ezimbili zenza leli khabethe elincane libe ntofontofo kubantu abangafika kwabangu-6.
Le ndawo isendaweni enhle eduze nendawo yase-Upper Buffalo. Imisebenzi eseduze ihlanganisa ukugibela izintaba, ukugibela isikebhe/ukuntanta, ukugibela amatshe, ukuhamba ngebhayisikili, ukudoba, ukugibela amahhashi, i-ATV/UTV nokugibela ibhayisikili elingcolile, ukubuka ama-elk e-Boxley Valley, phakathi kwezinye izinto eziningi.
Sihlala eHarrison futhi siyatholakala ukuze siphendule noma yimiphi imibuzo ongase ube nayo mayelana nesakhiwo nanoma yiziphi izindawo ezizungezile.
Hlola ezinye izinketho ezise- Compton namaphethelo